Universal ဆေးကြောနိုင်သောဆူညံမှုဆန့်ကျင်သောအစုအဝေးဂီတအားကစားနှင့်အိပ်စက်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်း - အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခနှင့်အခွန်ကောက်ခံခြင်း | WoopShop®
Universal ရေချိုးနိုင်သောဆန့်ကျင်ဆူညံသံအစုအဝေးအားကစားနှင့် Sleeping Headband
$11.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $15.99
အရောင် QH P O M Z TL R DL C BL B
တရုတ် / QH ယူနိုက်တက်စတိတ် / QH တရုတ် / P ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ တရုတ် / အို ယူနိုက်တက်စတိတ် / အို တရုတ် / M ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ China / Z ယူနိုက်တက်စတိတ် / Z တရုတ် / TL ယူနိုက်တက်စတိတ် / TL တရုတ်၊ ယူနိုက်တက်စတိတ် / R ကို China / DL ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ တရုတ် / ဂ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဂ တရုတ် / BL ယူနိုက်တက်စတိတ် / BL တရုတ် / ခ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ခ
Universal ရေချိုးနိုင်သော Anti-Noise အစုအဝေးဂီတအားကစားနှင့်အိပ်စက်နားပတ်လည် - China / QH backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ထိန်းချုပ်ရေး Button လေး: Yes
Active ကိုဆူညံသံ-Cancellation: အဘယ်သူမျှမ
ဆက်သွယ်ရေး: က Wired
Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး: အဘယ်သူမျှမ
frequency တုံ့ပြန်မှု Range: 40-20000Hz
Function ကို: လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် \_ t အားကစားဆိုင်ရာ နားကြပ်
sensitivity: 120dB ± 2
plug အမျိုးအစား: လိုင်းအမျိုးအစား
ပံ့ပိုးမှု APP: အဘယ်သူမျှမ
built-in နားကြပ်နှင့်အတူပျော့ပျောင်းသောအိပ်ပျော် headband
သင်၏ iPod၊ MP3 Player သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းထဲသို့ချက်ချင်းထိုးပါ
အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် Headband ကိုဆေးကြောနိုင်သည်
အရောင်: အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာ၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ နှင်းဆီ၊ မီးခိုးရောင်၊ မီးခိုးရောင်
ပစ္စည်း: ချည် (Polar သိုးမွေး, Polyester acrylic)
အဖုံး: ABS, 30mm
နာယက: 3016-32 အိုး
ကြိမ်နှုန်း: 20 မှ 20000Hz
sensitivity ကို: 120 + / - 4dB
သဟဇာတ - 3.5mm Audio Out Slot ရှိသည့်ကိရိယာများ
အဓိကထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - 260 x 75mm (L x W)
ကြိုးအရှည်: ခန့်မှန်းခြေ။ 105cm
Net ကအလေးချိန်: 40g
1 x အိပ်စက်ခြင်းနားကြပ်
အတူအိပ်ရန်အနည်းငယ်ပူအနည်းငယ်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေ။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုသာသင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ခြုံကြည့်ရင်ကောင်းတယ်
excelente produto ... chegou rápido ... super indico
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း!!! ကနေဒါသို့ 10 ရက်သာ။ သူတို့ကိုကြိုးစားပြီးတေးဂီတကကောင်းတယ်။ ကောင်းစွာထုပ်ပိုးလာအကြံပြုခဲ့သည် !!
အနက်ရောင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အိပ်စက်ခြင်းမှာအလင်းရောင်မရှိတော့ဘူး။ ကျေးဇူး